Chinja rako rakaomarara dhiraivha kuve ebook server nekutenda kuCaliber-Go | MaReaders ese
Chinja rako rakaomarara dhiraivha kuti ive ebook server nekuda kweCaliber-Go
Caliber ndeye inoshamisa ebook maneja uye zvinhu zvakaita sedzidziso iyi zvinoita kuti zviome kwazvo kune chero chirongwa chitsva chakagadzirwa kupfuura uyu maneja. Uye zvakare, kuve Yemahara uye Yemahara Software, mukana wekuve nemukwikwidzi wakanyanya kuomarara.
Mune ino kesi isu tichaenda kukuudza maitiro ekugadzira iri nyore server server neCaliber, Caliber-Go uye Google Drive, gore rakaomarara dhiraivhu yatinogona kushandisa mahara. Iwe unongofanirwa kutevedzera matanho atinokuudza iwe.
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kutora ese anodikanwa software, ndiko kuti, Caliber, Google Drive uye Caliber-Go, iyo yekupedzisira chirongwa chatinogona kuwana kuburikidza neGoogle Play Store. Nehurombo ini handina kukwanisa kuziva kana paine vhezheni yeIOS asi kuenda webhusaiti yekuvandudza, Ndofunga Caliber-Go inowanikwa chete kune Android.
Caliber-Go ichabata Caliber kuitira kuti raibhurari yako yega iri muGoogle Drive gore
Kana tangova nezvose izvi, tinoenda kuCaliber, pakombuta yedu, uye tinoenda kuCaliber Library -> Gadzira raibhurari nyowani. Muhwindo rinowoneka isu ngatigadzire raibhurari isina chinhu munzvimbo nyowani uye isu tinosarudza dhairekita kubva kuGoogle Drive yedu (Zvinosuruvarisa kuti hatigone kuita izvi paLinux, zvakadaro).
Kana zvese zvaratidzwa, tinya Ok uye mirira kuti raibhurari nyowani iwiriraniswe muGoogle Drive. Kana tine raibhurari hombe, tinofanirwa kumirira kwenguva yakareba. Kana wapedza kuwiriranisa, isu tinovhura Caliber-Go uye sarudza Google Drive uyezve nhoroondo yedu.
Mushure meizvi, raibhurari yatakaisa ichavhura uye kuti isu tinokwanisa kubata zviri kure kuburikidza neCaliber-Go asiwo neCaliber yedu. A kuwiriranisa kwakakwana kune avo vanoda kuverenga kuburikidza nenhare uye havadi kushandisa tambo kuenzanisa Nyore here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Software » Caliber » Chinja rako rakaomarara dhiraivha kuti ive ebook server nekuda kweCaliber-Go
Alfonso Ramos akadaro
Desle linux, nekupa iyo kero yeGoogle Drive, inogadzira raibhurari mukati / kumba / Yangu folda / https: /
Zvandakaita kuteedzera maforodha anonyatsoita raibhurari kuGoogle Drive yangu, uye voila, neCaliber-go ndiri kuona raibhurari yangu sekunge pasina chakaitika.
Izvo zvinongoramba zvichitarisira kuti iyo vhezheni yeCaliber ye linux inogona kutoita kubatana kwakananga, panguva ino, iyi ndiyo imwe nzira, inobatsira, kunyangwe isina kugadzikana kana iwe uchida kuzviona nenzira iyoyo.
Pindura kuna Alfonso Ramos
Caliber yanga ichimhanya pane linux kwenguva yakareba, yakawanda kupfuura mwedzi mishanu, zvirokwazvo yakazvarwa iri linux. Kopa izvi mune yako terminal uye uchave uine Caliber mu linux
sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh / dev / stdin
Vaparidzi vePoland vanosheedzera kukurumidza kuitiswa kwesarudzo yeEuropean paVAT pama ebook
Aya ndiwo mabhuku mashanu aanofarira aBill Gates aakaverenga panguva ino ya2016